ကိုဇော် သွင် said...
တစ်ချို့ ဆိုက် တွေမှာ ကွန်မန့် ပေးတာ ပေးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ ကျနော်က plus.google profile သွားကြည့်တော့ ကျနော့ရဲ့ profile နာမည်က်ုလက်မခံဘူးလို့ ရေးထားတယ်။ ကျနော့ google profile နာမည်က မြန်မာလို ကိုဇော်သွင် လို့ပေးထားတာ။ ကျနော်လည်း profile name ကို အင်္ဂလိပ်နာမည်နဲ့ ပြန်ပြီး edit လုပ်ပြီး submit ကိုနှိပ်တော့ တစ်ခုခု မှားတယ်လို့ပြောပြီး ပြန်ကြိုးစားခိုင်းနေတယ်။ အဲဒိ edit လုပ်တဲ့နေရာမှာ ကျနော် လိုလို့လဲမသိဘူး နည်းနည်း လည်နေလို့ ကူညီပါဦးခင်ဗျာ။ ကျနော် စောင့်မျှော်နေပါမယ်ဗျာ။ ကျနော့ gmail လိပ်စာက zawthwin3@gmail.com ပါခင်ဗျာ။ ကျနော့ကို ကူညီပေးပါဦးခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးပါ။
အားလုံး ကူညီ ပေးပါခင်ဗျာ။
ကျေးဇူး ထာဝရ ပါ။
Hlyothwetu Yin said...
တစ်ချို့ဆိုက်တွေမှာ မတူတော့ပေးလိုမရပါဘူး သူတို့တွေမှာ အဖွဲ့ဝင်ထားမှပေးလိုရပါတယ် ...google plus နဲ့မဆိုင်းပါဘူး....ကိုယ်ပေးချင်သောဆိုက်မှာ...အဖွဲ့ဝင်ထားရပါတယ်.....ok...တစ်ချို့ဆိုက်တွေက ပေးမတင်သေးပါဘူး...သူတို့စစ်ဆေးပြီးမှာ ဖော်ပြပေးပါတယ်...သူတို့ကာကွယ်တာက ညစ်ညမ်းသောစာများရေးပါက မဖော်ပြပေးပဲ ဖြတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်....
19 August 2012 at 07:47
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျာ! အခုလို ကူညီဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် အင်မတန်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ အစ်ကိုတို့ လျှိူ့ဝှတ်ဥယျဉ် ဆိုဒ် ဒိထက်အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ တစ်ကယ်ပါ
19 August 2012 at 08:02
poll နဲ့ပက်သက်ပြီးမေးချင်လို့ပါ။ ထည့်လို့မရဘူးဗျ အကုန်ပြင်ဆင်ပြီးထည့်လိုက်တာနဲ့မရတော့ဘူးဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့လဲရှိသေးတယ်ဗျ
slid Show မှာလဲ ပုံဘယ်လိုထည့်ရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ် ပြီးတော့ စာလုံးတွေမိတ်တုတ်
ဘယ်လိုလဲ..နားမလည်တော့ပါလား...ဘယ်မှာ သုံးချင်တာလဲမသိဘူး လျှိုဝှက်ဥယျာဉ်...မှာ...ထဲအသုံးပြုချင်တာလား...ဒါမှမဟုတ်မိမိ ဆိုဒ်မှာထဲအသုံးပြုချင်တာလားဆိုတာသိပါရစေ....ဒါမှလုပ်ပေးရတာလွယ်မှာပေါ့ပြန်ပြောခဲ့စေချင်ပါတယ်
အစ်ကိုရေ ဖုန်းကို restaret ချနည်းလေးပြောပြပေးပါခငိဗျာ။ backup ကိုဘယ်လိုမှတ်တယ် ပြီတော့ restaret ချပြီးလို့ software တွေပြန်မောင်းတင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်။restaret ချဖို့ ဘယ် setting ထဲဝင်ရမယ်ဆိုတာလေးကို ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။ကျဆနာ့် ဖုန်း က samsung galaxy gt5360 ပါ ခင်ဗျာ။ဆိုင်သွားလုပ်ရင် မတန်တဆ တောင်းတာ မကျေနပ်လို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လုပ်တတ်ချင်ချင်လို့ပါ အစ်ကိုရေ ကူညီသင်ပြပေးပါနော်။ ကျနော့ လိပ်စာက zawthwin3@gmail.com ပါ ခင်ဗျာ။
24 August 2012 at 01:06
How to turn off internet on the samsung galaxy y gt 5360
* Open dialer. * Dial *##4636##* to open “Testing” screen. * Tap on Phone Information. * Press the Menu key or button. * Tap on More. * Tap on Disable data connecti ... read more
I want to free download pc suite software for my samsung galaxy young 5360 how i download this software please give me some information about this?
Go to google and type in "samsung galaxy young 5360 pc software free download" and click search, and look around `til you find the right link ... read more
How to turn on t9 samsung galaxy gt5360
Turn off T9 from Samsung C5220 ... read more
How to use internet on pc by connecting samsung galaxy y 5360?
Connect it via the desktop software and conect it from there. there is tool ... read more
I want to know how to download cdc abstract control model for samsung galaxy y 5360?
Type it in on the internet on your mobile phone and it comes up. ... read more
How do i enable my files folder lock in samsung galaxy y gt 5360 mobile?
You have to downlod files lock from the applications store, it is free ... read more
How to get bsnl internet settings for my samsung gt-5360 handset?
You have to call customer care by dialling 9400024365 and need to talk to customer care executives. they will send settings for you. ... read more
My samsung galaxy s 1 turned off while rebooting itself now its frozen at samsung every time i turn it on how do i fix this?
Was your galaxy in any water if not i would take it to be repaired ... read more
My samsung galaxy gt5360 got wet and now it does`nt turn on any more?
Your Connector of screen may be wet as it is blinking so you should open the set completely and the dry it< if still it doesnot work then your IC is Short you need to got it changed. ... read more
Can you get bbm onasamsung galaxy gt5360
U can use any cross platform App like WhatsApp ... read more
မြန်မာလိုပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာ။ကျနော်မေးတာက မိမိဖုန်းကို ဆိုငိကဝယ်တဲ့ အတိုင်း အခွံချည်းပဲကျန်အောင်အကုန်ဖျက်ပစ်ချင်တယ်။မဖျက်ခင်မှာ conntect တို့ မြန်မာဖောင့်န်တို့ အခြားကိုယ်မှတ်ထားချင်တဲ့ software လေးတွေကို ဘယ်လိုbackup မှတ်ထားရမလဲ။ဖျက်ပြီဆိုရင်ဘယ်settimg ထဲဝင်ရမှာလဲ။ပြီးရင်ခုနကိုယ်မှတ်ထားတဲ့softwareတွေကိုဘယ်လိုပြန်ရှာပြီး install ပြန်လုပ်ရမလဲ ဆိုတာကို သိချင်လို့ပါခင်ဗျာ။မြန်မာလိုလေး ရှင်းပြပေးပါအစ်ကို။ကျနော့မေးလ်းကzawthwin3@gmail.comပါ။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်။
ဖုန်းက ကျွန်တော်ဆီမှာလဲ မရှိတော့ အသေးစိတ်တော့စာရေးပြလိုမဖြစ်ပါ...ကျွန်တော်နဲ့ပြောလိုပါက...မနက်ဖြန်..ဘယ်အချိန်ရှိတယ်ဆိုတာ...စာရေးခဲ့ပေးပါ...ကျွန်တော်...တို့တတ်နိုင်သလောက်ကူညီပါမယ်..
လျှို့ ဝှတ်ဥယျဉ်မှ ဆရာများခင်ဗျား တစ်ချို့ဒေါင်းလုပ်လင့်တွေနှိပ်လိုက်ရင် ဒီလိုသတိပေးစာကြီးပေါ်လာတယ်ဗျာ။
"window limit reached"
Could not openanew window because you have already opend the maximum number.
ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်။ ဒေါင်းလုပ် လုပ်လို့မရဘူးဗျာ။ အဲဒါ ဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်နေလို့ပါလဲ ခင်ဗျာ။
1 September 2012 at 04:32
Wunna Nyi said...
ဖိုး စက် said...
Nay Zon Aung said...
ဓါတ်ပုံ ၅ပုံလေက် ရှိ ပါတယ်
အကိုတို့ဘလော့ မှာ တင်ပေးလို့ ရ ရင် တင်ပေး
စေချင် ပါ တယ်
အကို စိတ်ဝင် စားရင် ဓါတ်ပုံဘယ် လို ပို့ ရမယ်
22 July 2013 at 19:33
အကို ကျနော် phone က8825d ကGtalk Softwareမပါလို့internet download
​အောင်​ နန်းစိုး said...